इन्स्टाग्राममा गरेको एक पोष्टबाट कोहली र प्रियंकाले कति कमाउँछन् ? – Sanchar Patrika
July 3, 2020 189
एजेन्सी । इन्स्टाग्राम पोष्टबाट सबैभन्दा धेरै कमाउने भारतीय सेलेब्रेटी हुन विराट कोहली । उनले एक इन्स्टाग्राम पोष्ट बाट २ लाख ९६ हजार डलर (२ करोड भन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ) कमाउछन । त्यस्तै दोस्रोमा छन् प्रियंका चोपडा । उनले एक इन्स्टाग्राम पोष्ट बाट २ लाख ८९ हजार डलर (२ करोड भारतीय रुपैयाँ) कमाउँछिन् ।
सोसल मिडिया कंम्पनी ‘हाँपर एचक्यू डटकम’ले हालै जारी गरेको इन्स्टाग्राम रिच लिस्ट २०२० मा विश्वका १०० जना सेलीब्रेटी परेका छन । त्यसमध्ये भारतबाट जम्मा दुई जना परेका हुन, विराट र प्रियंका । विराट कोहली लिस्टको २६औं र प्रियंका चोपडा लिस्टको २८औं नम्बरमा रहेका छन् । यो लिस्टको पहिलो नम्बरमा भने ड्वैन जोनसोन रहेका छन् । उनले एक पोष्ट बराबर दश लाख पन्ध्र हजार डलर कमाउँछन् ।
Prevभोलिबाट लकडाउन यस्तो हुने : भर्खरै सकियो बैठक
Next२०० करोड खर्च गरेर विवाह दाजुभाइको विवाह, २ सय हेलिकप्टर र सय जना पण्डित बुक, ४०० प्रकारको खाना पकाइने !
फेरी आयो खुशीको खबर, रुसले कोरोना विरुद्धको दोस्रो भ्याक्सिन बनाउने काम अन्तिम चरणमा, जसले २ डोजमा कोरोनालाई निर्मुल पार्ने दाबी
आज असाेज २ गते शक्रबार, कस्ताे छ आजकाे दिन हेर्नुहाेस् राशिफल